Pantrify - အခမဲ့စားစရာခန်းနှင့်ဈေးဝယ်စာရင်းအက်ပ Android Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » ကုန်စုံများစာရင်း » Pantrify - အခမဲ့စားစရာခန်းနှင့်စျေးဝယ်စာရင်း app ကို👌
Pantrify - အခမဲ့စားစရာခန်းနှင့်စျေးဝယ်စာရင်း app ကို👌 APK ကို
Pantrify သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ရေခဲသေတ္တာ, သင့်စျေးဝယ်စာရင်းသို့မဟုတ်နေရာတိုင်းမှာအတွက်, သင့်စားစရာခန်း၌သငျရှိသည်ထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီပေးသည်ဟာအခမဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ Pantrify နှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့စာရင်းများ (ပင်စျေးဝယ်စာရင်း) မိုဃ်းတိမ်ပေါ်မှာရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကနေရာတိုင်းမှာသင်သွားသငျနှငျ့အတူနေဖို့! သင်လုပ်နိုင်သည် ဝေစု သင်အလိုရှိသောလူတိုင်းအတွက်သူတို့နှင့်အတူ! ဒါ့အပြင်သင်သည်မည်သည့်ကိရိယာ (စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, PC, ... ) မှသူတို့ကိုရယူနိုငျပါသညျ။
သင်အလိုရှိသကဲ့သို့သငျအဖြစ်အများအပြားအုပ်စုများဖန်တီးနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားခြားနားသောနေအိမ်များသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ '' စားစရာခန်း ',' ရေခဲသေတ္တာ 'သို့မဟုတ်' 'ရေခဲသေတ္တာ' 'နှင့်တူမျိုးစုံစာရင်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်ရုံတစ်ကိုထိပုတ်ပါအတူစျေးဝယ်စာရင်းပစ္စည်းများထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ပိုကောင်း, Pantrify ပါစေ သင်တို့အဘို့အကဖြည့်ပါ!
ဘာပဲ (စားစရာခန်း, စျေးဝယ်စာရင်း, ရေခဲသေတ္တာ, ... ) စုစည်းဖို့✓အကွိမျမြားစှာစာရင်း
✓အချိန်နှင့်တပြေးညီ update ကိုပြောင်းလဲ
✓တစ်ခုချင်းစီကိုစာရင်းထဲတွင်တစ်ဦးချင်းစီထုတ်ကုန်များ၏အရေအတွက် (လည်းစုစုပေါင်း) နဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြရန်
✓လျင်မြန်စွာစည်းရုံးနှင့်စစ်ထုတ်ကိရိယာများမှ tags များ Create
သငျသညျ Walmart, Kroger, Albertsons သို့မဟုတ်အလားတူအတွက်ဝယ်ယူခံရဖို့အချို့သောအစားအစာရှိသည် Do ¿? တစ်ဦး tag ကို ဖန်တီး. လျင်မြန်စွာသူတို့ကိုရှာပါ။
သငျသညျစျေးဝယ်သွားပါသလား? Pantrify Check နှင့်သင့်စားစရာခန်းသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာအဘို့အဘယ်အရာကိုမျှမမေ့မလြော့ပါ!
🍏🍞🎉 ASAP Pantrify Get နှင့်သင့်စားစရာခန်းနှင့်သင်၏စျေးဝယ်စာရင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းစတင်နိုင်! 🎉🍞🍏
✓ (ကင်မရာကိုသုံးပြီး) ဘားကုဒ်ကိုအားဖြင့်ပစ္စည်းများကို Add
✓ (မိုက်ခရိုဖုန်းကိုသုံးပြီး) မိန့်ခွန်းများကပစ္စည်းများ Add
✓ CSV ကိုတင်ပို့
စာရင်းများအကြား✓ရွှေ့ & Copy ကူးပစ္စည်းများ
တစ်ဦးပွတ်ဆွဲနှင့်ဝယ်အဖြစ်မာ့ခ်တစ်ခုကို item ✓
✓မိုင်းနားတိုးတက်မှု & ဘာဂ်
Pantrify - အခမဲ့စားစရာခန်းနှင့်စျေးဝယ်စာရင်း app ကို👌
5.27 ကို MB
Buy ဖို့လိုအပ်ပါတယ် - ...